Goblin ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel December 04, 2016
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကလဲ မထွက်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ရေပန်းစားနေတဲ့ Drama လေး တစ်ခုပါ ... သိပ်မကြာခင်ကမှ ၀က်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ Train to Busan ထဲက မင်းသားက ခေါင်းဆောင် မင်းသား အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်​​ပေါင်းကိုးရာ​လောက်​က စစ်​သူကြီးတစ်​ဦးက ဘုရင်​တစ်​ပါးရဲ့ အငြိုးထားမှုကိုခံရပြီး သူ့ရဲ့လက်​စွဲ​တော်​ဓားနဲ့ပဲ အဆုံးစီရင်​ခြင်းခံလိုက်​ရပါတယ်​ ... သူဟာ လူ​ကောင်းတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​သလို... မ​ကောင်းမှု​တွေလည်းကျူးလွန်​ထားတဲ့သူဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ သူ့ကို ထာဝရမ​သေနိုင်​တဲ့ နတ်​ဆိုးတစ်​​ယောက်​အဖြစ်​အသက်​သွင်း​ပေးလိုက်​တယ် ​... သူ့ရဲ့ရင်​ဝမှာစိုက်​​နေတဲ့ဓားကို ထုတ်​လိုက်​မှ နတ်​ဆိုးက ​သေဆုံးမှဖြစ်​ပြီး​တော့ အဲ့ဓားကို နတ်​ဆိုးရဲ့သတို့သမီး ဖြစ်​လာမဲ့သူကသာ ဆွဲနိုင်​မှာဖြစ်​တယ်​ ... ဒါက​တော့ နတ်​ဆိုးရဲ့ အ​ကြောင်း​လေး​ပေါ့ ..
ဇာတ်​ကားအ​ကြောင်း​ပြောရရင်​​တော့ ... နတ်​ဆိုးက ကိုယ်​ဝန်​သည်​တစ်​​ယောက်​ကို ကယ်​လိုက်​မိတာက စတယ်​​ပြောရမယ် ​... သူကယ်​လိုက်​တဲ့ က​လေးက နတ်​ဆိုးရဲ့သတို့သမီးလို့ သရဲ​တွေက​ပြောကြတယ်​ ... အဲ့က​လေးမ​လေးက ငယ်​ငယ်​ထဲက သရဲ​တေကိုမြင်​နိုင်​တဲ့အပြင်​ ... ​သေမင်းကို​တောင်​မြင်​နိုင်​တဲ့အစွမ်းမျိုးရထားခဲ့တယ်​... ​သေမင်းကလည်း သူ့ရဲ့​ပျောက်​​နေတဲ့ဝိဥာဉ်​ဆိုပြီး ​ကောင်​မ​လေး​နောက်​ကိုလိုက်​​နေတာဆို​တော့ ...
​သေမင်း နဲ့ နတ်​ဆိုးနဲ့..​ကောင်​မ​လေးနဲ့ ... ဘယ်​လို​တွေစခန်းသွားကြမလဲ .. ပြီး​တော့ ​သေမင်းအ​နေနဲ့ အချစ်​ကို​တွေ့သွားမလားဆိုတာကို Goblin ဆိုတဲ့ ဒီကား​လေးကို စောင့်ကြည့်ပြီး ခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါနော် ...
Rating တွေ အနေနဲ့ကတော့ Viki မှာ 9.4/10 နဲ့ Drama Fever မှာ 4.7/5 အသီးသီး ရရှိထားပါတယ် ... rating အနေ အရရော popular ဖြစ်နေတဲ့ အရရောဆိုရင် ဇာတ်လမ်း ကောင်း မကောင်းကိုတော့ ပြောစရာကို လိုမနေတော့ပါဘူးနော် ... ကဲ ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော် ...
Episode5( V.I.P Linik )
Fantasy Korea Melodrama Romance
Labels: Fantasy Korea Melodrama Romance
Thar Soe December 5, 2016 at 10:37 PM
အခုလို တင်ပေးနေတာ ကျေးဇူးပါ
mayyu mgmg December 6, 2016 at 4:41 AM
အဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေး အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းသဘောအရ လည်း သမရိုးကျမဟုတ်ပဲ အရမ်းကို ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် update ဖြစ်အောင်ဆက်တင်ပေးပါ ပေါက်ကားလေးပါ thank you Myanmarasiantv
jinny lwin December 6, 2016 at 6:10 PM
Goblin ep2ကို VIP link လေးနဲ့ တင်ပေးပါ ဦး နော် Pcloud နဲ့ က အဆင်မပြေလို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့်
ပေတောရွာလေး March 15, 2017 at 11:24 AM
GCM Phyo Zaw December 10, 2016 at 4:53 PM
Ep3စောင့်မျော်နေတယ်
jinny lwin December 13, 2016 at 8:13 PM
episode2ကိုVIP link လေးနဲ့ တင်ပေးပါလား
Unknown December 18, 2016 at 9:41 PM
Kimjun Hee December 21, 2016 at 8:15 PM
ပိုး ဟတ်ဖြူ December 29, 2016 at 10:20 AM
Si Thu Win January 14, 2017 at 6:09 AM
jinny lwin January 15, 2017 at 9:12 PM
please wanna to see new episodes..
Si Thu Win January 22, 2017 at 8:57 AM
Plz new episodes.......
Si Thu Win January 22, 2017 at 8:58 AM
new era January 26, 2017 at 7:58 AM
Su Wai May 20, 2017 at 12:24 AM
Chanro June 24, 2017 at 8:27 AM
Chanro June 24, 2017 at 8:28 AM